धमिलियो भुटानको सम्झना, सन्तान उडे पुनर्वासमा
रिपोर्ट गोपाल गडतौला
२८ असोजमा झापाको बलडाँगी शिविरको छाप्रोमा एक्लै भेटिएकी खिनमाया आचार्य (८४) ११ सन्तानकी आमा भएर पनि बुढेसकालमा एक्लै बन्नु परेकामा दुःखी थिइन्।
नेपालमै घुलमिलको बाटोमा भुटानी शरणार्थी
स्थानीय सरकारले जन्मदर्ता, ब्यांक खाता, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सुविधा दिएर भूटानी शरणार्थीलाई यहींको समाजमा घुलमिल गराउन शुरू गरेका छन्।
नेपालका जेलमा विदेशी कैदी
देशभरका कारागारमा विभिन्न २५ वटा अपराधमा ८९८ विदेशी कैदी छन् ।
महिला हिंसा २२ वर्षमा ३६ गुणाले बढ्याे
पछिल्लो समय बलात्कारका घटना दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ यताको तीन वर्षमा देशभर बलात्कारका ३७०० घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ। यो आँकडा अनुसार, सरदर दैनिक तीन महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् ।
गरीबी निवारण कोषमा भाँडभैलो
गरीबको हित गर्न स्थापित गरीबी निवारण कोषमा चरम आर्थिक अनुशासनहीनता र भद्रगोल देखिन्छ ।
कानूनले छेक्यो घरजमको सपना
पुरुष र महिलाबीचको बिहेलाई मात्र मान्यता दिने देवानी संहिताको प्रावधानले केही वर्षयता आँट गरेर सार्वजनिक भएका समलिङ्गी जोडीहरूको घरजम गर्ने सपनालाई कुल्चेको छ।
हात्ती र मानिसबीचको द्वन्द्व कसरी रोक्ने ? यस्तो छ प्रस्ताव
नेपालमा करिब साढे चार दशकदेखि चलिरहेको हात्ती र मानिसबीचको द्वन्द्वको कारण हात्तीको आवागमन मार्ग र वासस्थनमा अतिक्रमण नै हो । यो रोक्न यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था ग्रिन जेनेरेशनले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
एक साताअघि राजधानीको माहाँकाल मन्दिर अगाडिको पेटिमा हात थापेर बसेकामध्ये धनमाया उप्रेती र सीता चौलागार्इँ पनि थिए । केही वर्ष अघिसम्म धादिङमा थिइन् धनमाया । एक छोरा थिए । “विदेशिएको छोरोको खबर आउन छोड्यो, घरजग्गा नातेदार कोही छैनन्” धनमाया भन्छिन, “उपाय केही नभएपछि पेट पाल्न यही पेटीमा आइपुगें ।”
आमाको प्रेरणा, दृष्टिविहीन छोराछोरीको प्रगति
दृष्टिविहीन सन्तानको प्रगतिमै चुनकुमारीका लागि ऊर्जा छ । ७५ वर्षको उमेरमा उनी कहिले गुल्मी, कहिले काठमाडौं गरिरहन्छिन् ।
अफगानी शरणार्थीलाई पहिचानको सङ्कट
काठमाडौंमा अहिले १३ परिवारका ५३ अफगानी ‘शरणार्थी’ छन्, जसलाई नेपाल सरकारले भने शरणार्थीको पहिचान दिएको छैन ।
शहरिया बन्दै सन्थाल समुदाय
आफ्नो नाममा जमीन नहुँदा गरीबीको चपेटाबाट बाहिर निस्कन नसकेका आदिवासी सन्थाल समुदायका सदस्यहरु अवसरको खोजीमा शहर छिर्दैछन्।
दुई दशकसम्म शरणार्थीदेखि स्थानीयसम्मलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिएका भूटानी शरणार्थी डा. भम्पा राई आफैं थलिंदासम्म पनि स–सम्मान स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो थातथलोमा फर्किने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
'घरमा पस्न नदिनेले पनि आँगनमा समानता देखाउन थालेका छन्'
“मेरा बाबुआमा आँगनमै रहे, म बलेंसीसम्म पुगेकी छु” वडा सदस्य रिना भन्छिन्, “मेरा छोराछोरीको पुस्ताले मात्र त्यो सीमा काट्ने होलान् ।” झापाका दलित महिला जनप्रतिनिधिको अनुभवमा नेपाली समाज परिवर्तन त भइरहेको छ, तर धिमा गतिमा ।
राजमार्ग छेउछाउ मनपरी बाटो निर्माण
समाचार गोपाल गडतौला
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न अवैध रूपमा निर्माण गरिएका सडकहरू दुर्घटनाका कारण बनिरहेका छन्।
शरणार्थी जीवनको दस्तावेज
आफ्नै मातृभूमिबाट अनागरिक हुनुको पीडा भोगेका भूटानी शरणार्थीको विगत र आगतको झल्को हो– देश खोज्दै जाँदा ।
बालविवाह गर्न भारत
कमजोर कानून कार्यान्वयनका कारण मोरङका सीमान्तकृत आदिवासी समुदायमा बालविवाह सामान्य छ ।